Karbaash mink oo dhab ah oo gacan-ku-sameys ah oo tayo sare leh: 100% dhogor dhab ah oo dhab ah oo ah gebi ahaanba badeecad aan naxariis lahayn. Length of our jeedal JM-LSH-S Series are from 0.8-15mm Soft cotton band: The suuf super suuf waa 28-30mm dheer oo ka mid ah 3D baarkooda dhabta dhabta ah waa u jilicsan yahay indhaha ...
Ku nadiifi baarkooda beenta adoo isticmaalaya weel balaastig ah!
Tusaalaha Tusmada Su'aalaha la Weydiiyo Q. 1: Miyaan heli karaa xoogaa tijaabo ah oo baarkooda? J: Haa, amarka muunadda ayaa loo heli karaa hubinta tayada iyo imtixaanka suuqa. Laakiin waa inaad bixisaa ...
Had iyo jeer nadaafadaada faux nadiif ha ahaadaan oo waqtiga ugu dheeree! Maxaan u nadiifinaynaa baarkooda beenta ah? Baarkooda been-abuurka ah mararka qaarkood wuxuu noqon karaa mid aad u qiimo badan, markaa waxaad u baahan kartaa inaad awood u yeelato inaad isticmaasho wax ka badan hal jeer. Sida indhashareerka beenta ah ee Felvik, badanaa waxay awoodaa inay adeegsato ilaa 20-25 jeer haddii ...
Ku soo dhowow Felvik - Qalabkaaga Hal-Joogsi ee alaab-qeybiye!
Felvik waa shirkad qurux ah oo ku takhasustay baarkooda been abuurka ah, balaadhinta baalallayda iyo alaabada la xidhiidha iyada oo ujeedadu tahay in ganacsigaaga la fududeeyo oo macaamilkaagu u ekaado oo uu dareemo kan ugu fiican naftooda. Felvik aad ayuu ugu faraxsan yahay inaad halkaan joogto! Haddii aad raadineyso been abuur ama been abuur ...
Waa maxay jeedal Mink?
Waxa jira noocyo badan oo indhashareerka been abuurka ah oo suuqa yaalla: Mink lashes, Faux eyelashes, Faux mink lashes, synthetic eyelashes, Human Hair lashes, Horse Timaha silsilado, iyo wixii la mid ah. Waxay noqon kartaa wax aad u jahwareersan markii la isku dayo in la soo koobo khilaafaadka iyo ...
Sidee loo Codsadaa loona Daryeelaa indhashareerka beenta ah?
Sidee loo codsadaa? Tallaabada 1. Cabir dhererka dhejiska dhejiska adigoo si tartiib ah u dhigaya baalasha indhahaaga iskana soo yareynaya qaybta ka sarraysa. Hadday aad u dheer yihiin, waxay abuuri doonaan muuqaal baalal ba'an oo indhaha dilaaca ah, sidaa darteed fadlan hubi in dhererkaagu uu ku habboon yahay oo uu ku habboon yahay yo ...
Baarkooda Xariirta Felvik
Maxaa baarkooda xariir? Asal ahaan, Silsiladaha Xarkaha iyo Mink lashes-ka waxaa laga sameeyaa wax isku mid ah, labaduba waa PBT synthetic. Farqiga ugu weyn ee udhaxeeya ma aha maaddadooda, laakiin waa qaabkooda, dhammaadkooda, iyo culeyskooda. Karbaashka silkku waxay leeyihiin faleebo dhaadheer, taas macnaheedu waa, ma ...